जीवन शैली – Page 102
क्वाँटी कसरी, कति, किन खाने ? जान्नैपर्ने केही कुरा
क्वाँटी कसरी, कति, किन खाने ? जान्नैपर्ने केही कुरा आज जनै पूर्णिमा । यस दिनको विशेष खान्की हो, क्वाँटी । त्यसो त हरेकजसो पर्वको आ–आफ्नै विशेष परिकार हुने गर्छ । जस्तो तिहारमा सेलरोटी, दशैंमा मासु, माघे संक्रान्तिमा कन्दमुल, असार पन्ध्रमा दही चिउरा । झ्ट्ट हेर्दा लाग्छ, यो खाने संस्कृतिको आधुनिक जीवनसँग कुनै साइनो छैन ।
यसरी एकै दिनमा हटाउनुस् अनुहारको नचाहिएको रौं
काँचो दूध,तर, बेसार,बेसन बिधि : एक चम्चा काँचो दूधमा थोरै बेसन, एक चिम्टी बेसार र उमालेको दूधको तर मिसाएर मिश्रण बनाउने र यो लेपलाई धोएको अनुहारमा पुरै लगाउने अनुहार सुख्खा हुन्जेल राख्ने र पुरै सुकीसकेपछी बिस्तारै हातले मसाज गर्ने यसो गर्दा कमजोर भएका रौहरुले जरा देखीनै ठाउँ छोड्छ । बिस्तारै अव मनतातो पानिले मुख धुने तपाईंले
सुरुको अवस्थामा स्तन क्यान्सर पत्ता लगाउने तरिका, सबैले एकपटक पढाैँ !
सुरुको अवस्थामा स्तन क्यान्सर पत्ता लगाउने तरिका, सबैले एकपटक पढाैँ महिलामा देखिने गम्भीर स्वास्थ्य समस्यामा स्तन क्यान्सर पनि पर्दछ । सामान्य विचार नपु¥याउँदा र बेलैमा रोगको निदान एवं उपचार गर्न नसक्दा स्तन क्यान्सरबाट कयौँ महिलाले अकालमै ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । जनचेतनाको अभाव, गरिबी, अशिक्षा र अज्ञानताका कारण स्तन क्यान्सरबारे महिलाले कुनै जानकारीसमेत पाउँदैनन् ।
तीन कक्षामा पढ्ने बालकले डोको बुनेर पाल्छन् दशजनाकाे परिवार
/ ताप्लेजुङ – ग्रामिण क्षेत्रका अधिकांश ठाउँमा अझै बालश्रम रोकिएको छैन् । पारीवारिक आर्थिक अवस्था नाजुक हुँदा ग्रामिण क्षेत्रका बालबालिकाहरु पढाई खर्च आफै जुटाउन सानै उमेरदेखि श्रम गर्न बाध्य छन् । मेरिङदेन गाउँपालिका–६, नाल्बुका ११ वर्षका बालक आफै डोको बन्छन् र बजार लगेर बेचेर पढाई खर्च साथै घर खर्च समेत जुटाउने गरेका छन् ।नाल्बुका ११ वर्षका लाक्पा
तपाईको कुन ब्लड ग्रुप हो? ए ब्लड ग्रुपका लागि खानाहरू
ए ब्लड ग्रुप भएकाहरूमा दुग्धजन्य पदार्थको एलर्जीको समस्या धेरै पाइने गरेको छ । यस्ता ब्लड ग्रुपका मानिसमा मासुजन्य पदार्थ पचाउने क्षमता पनि कम हुन्छ । त्यसैले ए ब्लड ग्रुप भएकाहरूले दुग्धजन्य पदार्थ तथा माछा–मासु कम खानुपर्छ । यस्ता ब्लड ग्रुप भएकाहरूले आफ्नो खानामा शाकाहारी खानेकुरा बढी समावेश गर्नु वेश हुन्छ अर्थात् फलफूल, सागसब्जी एवं अन्न,
यसरी हट्छ दाँतको पहेँलोपन
दाँतको पहेँलोपन मानिसका लागि सजाय नै साबित हुन्छ । यही कारण कतिपय मानिस महत्वपूर्ण ठाउँमा समेत सहभागी नहुने गर्छन् । कतिपय भने यसकै कारण कैयौँ मानिससँग खुलेर कुरा गर्नसम्म हिच्किचाउँछन् । यतिसम्म कि हाँस्दासमेत मुखमा हात राख्नुपर्ने बाध्यता हुन सक्छ । तर, दाँतलाई पहेँलो बनाउने कैयौँ कारण हुन्छन् । जसमा बढी चिया, कफी, तम्बाखु र
गर्मीमा लाग्छन् यस्ता रोग
गर्मी मौसममा प्रदूषित खाना, पानी र कीटाणुका कारण बालबालिकामा झाडापखाला, हैजा, फुड प्वाइजनिङ, डेंगु, हेपाटाइटिस, भाइरल फिभर, इन्फ्लुएन्जालगायतका रोग लाग्ने गर्छ । हेपाटाइटिस ए, टाइफाइड पनि गर्मीमा हुने प्रमुख समस्या नै हुन् । उसो त जुनसुकै समयमा बालबालिकाको स्याहारमा ध्यान दिन जरुरी हुन्छ । किनकि, सबै मौसममा बालबालिकालाई रोगले आक्रमण गर्न सक्छ । यस्तो मौसममा
अमेरिकी र नेपाली युवामा फरक के छ ?
नेपालबाट पहिलोपटक डीभी परेर अमेरिका पुग्ने परिवारका सदस्य हुन् दुर्गा दाहाल। उनकी श्रीमती कल्पना दाहाललाई डीभी परेपछि दुर्गा सपरिवार अमेरिका बस्दै आएका छन्। सन् १९८९ मा कल्पनासहित नेपालबाट पाँच जनालाई डीभी परेको थियो। झन्डै २५ वर्ष अमेरिकामा बिताएका दुर्गासँग अमेरिकी समाज र त्यहाँका युवामाथि शैलीका लागि गरिएको कुराकानी। लामो समयदेखि अमेरिका बस्दै आउनुभएको छ। अमेरिकन किशोरकिशोरीमा
डाक्टर नै मानिसलाई रोगी बनाइरहेका छन्ः डा. मनबहादुर
, काठमाडौं । हाम्रो मुटु कुनै स्वचालित यन्त्र झैं हरक्षण चलीरहेको हुन्छ, जसलाई हामी ढुकढुकी या धड्कन भन्छौं । मुटुको यही सन्तुलित चालकै कारण शरीरका हरेक कोषसम्म रगतसँगै अक्सिजन र ग्लुकोज प्रवाह हुन्छ र हाम्रो जीवन चल्छ । कहिलेकाँही मुटुको यही चालमा गडबडी उत्पन्न हुन्छ । मुटुको चालमा गडबडी भएमा राम्रोसँग विद्युतीय तरंग उत्पादन गर्न
सावधान ! गर्भवतीले कफी पिउनु हानिकारक
सावधान ! गर्भवतीले कफी पिउनु हानिकारक गर्भावस्थामा के खाने, के नखाने, के गर्ने, के नगर्ने सबै कुरामा ख्याल राख्नुपर्छ । किनभने यो शरीरको एक संवेदनशिल चरण हो । यही चरणमा गरिने कतिपय गल्तीले गंभिर समस्या निम्त्याउन सक्छ । गर्भावस्थामा मदिरापान, धुमपान त बर्जित नै छ । गर्भवतीले मदिरा सेवन गर्दा धुमपान गर्दा त्यसको सोझो असर
Prev 1 … 101 102 103 … 106 Next